Arsenal ayaa ku garaaci karta Man Utd iyo Real Madrid saxiixa Kylian Mbappe, sababtaan darteed! - Hablaha Media Network
Arsenal ayaa ku garaaci karta Man Utd iyo Real Madrid saxiixa Kylian Mbappe, sababtaan darteed!
HMN:- Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in aysan weli ka quusan loolanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka dhallinyarada ah ee kooxda AS Monaco Kylian Mbappe, sida laga soo xigtay majaladda Daily Mail ee dalka Britain.
Tababaraha aan mustaqbalkiisa la hubin ee kooxda Gunners Arsene Wenger ayaa lagu soo waramayaa inuu qiimo lacageed rikoor ah kula soo wareegi karo 18 sanno jirka u dhashay dalka France.
Monaco ayaa xiddigaan ku dooneysa 100 milyan oo euros oo u dhiganta 85 milyan oo ginni, iyadoo xiddigaani uu xilli ciyaareedkaan wacdaro ka dhigay tartanka UEFA Champions League.
Kooxaha Real Madrid, Juventus, Chelsea iyo Manchester United ayaa dhammaantood isha ku haya saxiixa xiddigaan. Laakiin tababaraha Arsenal wuxuu u ballan qaadayaa wax aysan u ballan qaadi karin dhammaan afartaas kooxood.
Waana inuu ka ciyaarsiin doono booska weerarka dhexe si uu goolal badan u dhaliyo haddii uu xagaagaan kusoo biiro Arsenal, sidoo kale wuxuu ka ballan qaadayaa inuu ciyaarsiin doono Isbuuc kasta oo uusan keydka geli doonin haddii uu yimaado FLY Emirates Stadium, sida ay sheegeyso majaladda Daily Mail.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal waa inay bixiso laba u jibbaar qiimihii ay kusoo iibsatay kubadsameeyaha reer Germany Mesut Ozil xagaagii 2013kii, si ay gacanta ugu soo dhigto Kylian Mbappe, iyadoo xiddiga ugu qaalisan taariikhda Arsenal Ozil lagu soo iibsatay 43 milyan oo ginni.